China Minlockist Glass Lock Lock ho an'ny fanamboarana varavarana vita amin'ny Glass Frame Slim YALIS
Locking Glass Glass Minimalist ho an'ny varavarana fitaratra vita amin'ny vera kely
Fitaovana: firaka aliminioma
Mortise: hidin-trano fonosana mahazatra EURO
Fitsapana famafazana sira: 72-120 ora
Fitsapana tsingerina: in-200000
Hatevin'ny varavarana: 8-12mm
Fampiharana: varotra sy fonenana
Famaranana ara-dalàna: volamena matt, satt volamena volamena
Ora nanomezana: 35 andro aorian'ny fandoavana
Fahaizana manome: 50000 Piece / Pieces isam-bolana
Fe-potoana fandoavana: T / T, L / C, Kara-trosa
Noho ny lazan'ny fomba minimalista tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny varavarana vera kely vita amin'ny vera dia nanjary tian'ny olona indrindra. Satria tery kokoa noho ny vatan'ny varavarana fitaratra tsotra ny zana-baravaram-baravaram-baravarankely, noho izany dia mila fanamboarana vatana hafa mihidy amin'ny hidin-trano fitaratra tsotra. YALIS [GUARD] andiany teraka tamin'io.
Ny firafitry ny GUARD dia miorim-paka, rafitra fantsom-bokatra vita amin'ny fantsom-baravarana sy famolavolana tokana tokana, no vahaolana farany mihidy varavarana farany amin'izao fotoana izao ho an'ny varavarana fitaratra somary avo lenta afovoany.
Ny fisehoan'ny hidin-tànana fitaratra varavarana fitaratra YALIS dia ny endrika farany manify indrindra amin'ireo hidin-trano fitaratra varavarana fitaratra. Izy io dia miaraka amina hidy vy 60mm hanenjana ny fanelingelenana ny tabataba, hampihena ny isan'ny lavaka varavarana, hampihenana ny fahasimban'ny varavaram-pitaratra, ary hisokatra ary hikatona mafy kokoa.
Ny fitaovan'ny lakilen'ny fitaratra varavarana fitaratra YALIS dia firaka aliminioma, izay afaka mamita ny farany amin'ny valin'ny varavarana. Izy io dia mifangaro tanteraka amin'ny varavaram-pitaratra, hany ka tsy misy farany ny fahitana anatiny. Ary koa ny haben'ny felam-boninkazo dia azo ampanjifaina araka ny mombamomba ny alim-baravarana fitaratra varavarana.
YALIS tantely volo fitaratra varavarana fitaratra, dia vahaolana avo lenta nomen'ny YALIS ho an'ny mpanjifa. Na ny fisafidianana ara-pitaovana, ny asa-tanana, ny fanaraha-maso ny kalitao na ny serivisy aorian'ny fivarotana, dia miezaka izahay mba hanana hatsarana. Ny tanjonay dia ny hanomezana vahaolana ho an'ny mpanjifa amina vahaolana tsotra sy tsotra ary tonga lafatra.
Teo aloha: Famolavolana Minimalista anatiny ho an'ny vavahady profil
Manaraka: Matt Black Slim Frame Glass Door Lock Lock
F: Inona no atao hoe YALIS Design?
A: YALIS Design dia marika mitarika amin'ny vahaolana avo lenta sy avo lenta.
F: Raha azo atao ny manolotra serivisy OEM?
A: Amin'izao fotoana izao, ny YALIS dia marika iraisam-pirenena, noho izany dia manamboatra ny mpaninjara marika izahay manerana ny filaminana.
F: Aiza no ahitako ireo mpanaparitaka ny marikao?
A: Manana mpizara ao Vietnam, Ukraine, Lithuania, Singapore, Korea atsimo, The Baltic, Lebanon, Saudi Arabia, Brunei ary Sipra izahay. Ary mamorona mpaninjara bebe kokoa amin'ny tsena hafa izahay.
F: Ahoana no hanampianao ireo mpaninjara anao amin'ny tsena eo an-toerana?
1. Manana ekipa marketing izahay izay miasa ho an'ireo mpaninjara anay, ao anatin'izany ny famolavolana efitrano fandraisam-bahiny, famolavolana fitaovana fampiroboroboana, fanangonana fampahalalana amin'ny tsena, fampiroboroboana Internet ary serivisy marketing hafa.
2. Ny ekipanay mivarotra dia hitsidika ny tsena hanaovana fikarohana amin'ny tsena, ho fampandrosoana tsara sy lalina kokoa eo an-toerana.
3. Amin'ny maha marika iraisam-pirenena antsika dia handray anjara amin'ny fampirantiana fampitaovana matihanina sy fampirantiana fitaovana izahay, ao anatin'izany ny MOSBUILD any Russia, Interzum any Alemana, hananganana ny marika amam-bika eo amin'ny tsena. Ka ny lazanay dia hanana laza malaza.
4. Ireo mpaninjara dia hanana ny laharam-pahamehana amin'ny fahalalana ireo vokatra vaovao.
F: Afaka ny ho mpizara ve ianao?
A: Matetika izahay dia miara-miasa amin'ireo mpilalao TOP 5 eny an-tsena. Ireo mpilalao manana ekipa mpivarotra matotra, fantsom-barotra ary fampiroboroboana.
F: Ahoana no ahitako ny ho mpizara irery anao eo amin'ny tsena?
A: Ilaina ny mifankahafantatra, azafady mba omeo anay ny drafitra manokana momba ny fampiroboroboana ny marika YALIS. Mba hahafahantsika mifanakalo hevitra bebe kokoa momba ny mety ho fizarana tokana. Hangataka fividianana lasibatra fividianana isan-taona amin'ny toe-draharaha misy anao izahay.
Tanana am-baravarana ho an'ny varavarana fitaratra
Glass fitantanana varavarana
Tanana varavarana fitaratra
Hidin-tànana varavarana fitaratra
Kitapo varavarana fitaratra amin'ny tanany
Tanana ho an'ny varavarana fitaratra
Tanana eo am-baravarana fitaratra fitaratra
Tanana am-baravaran-dàlana mamaky trano
E Shape Door Hinge
Famolavolana Minimalista anatiny ho an'ny vavahady profil
Ankizy fiarovana varavarana fiarovana ho an'ny zaza efitrano
Matt Black Shower Door Set
Tanana antitra varavarana miaraka amin'ny lakile lakile